Argagax cusub: Shabaab ku labisan dareeska ciidamada Kenya iyo Gaadiidka dowlada oo gudaha u Galay Kenya - Hablaha Media Network
Argagax cusub: Shabaab ku labisan dareeska ciidamada Kenya iyo Gaadiidka dowlada oo gudaha u Galay Kenya
HMN:- Taliska Booliska ciidamada Kenya ayaa shaaca ka qaaday in gudaha Kenya ay soo buux dhaafiyeen maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo ku hubeysan Hubka noocyadooda kala duwan.
Taliska ayaa sheegay in maleeshiyaadka ay wataan Hub iyo Gaadiid laga dhacay ciidamada Kenya, kuwaa oo isku muuqaal ekeysiinaaya ciidamada.
Warbixin kooban oo kasoo baxday Taliska ayaa waxaa lagu sheegay in maleeshiyaadkasi ay ku labisan yihiin xitaa dareeska ciidanka, isla markaana ay maleeshiyada u adeegsaneyso weeraro fool-ka-fool ah oo ka dhaca gudaha Kenya.
Maleeshiyaadkani aadka u hubeysan una muuqaalka ek ciidamada dowlada Kenya ayaa la xaqiijiyay in iminka ay ku dhex dhuumaaleysanayan qeybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Maleeshiyaadkani ayaa laga cabsi qabaa inay weeraran Xarumaha dowlada iyo Bangiyada Kenya oo la rumeysan yahay in dhawaan ay ku daadiyeen warqado digniin ah.
Shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay ka gudbeen xadka ay wadaagaan labada dal waxaana ay weeraro ka geysteen degaano hoos yimaada gobolka waqooyi Bari.
Geesta kale, dadka ku nool tuulooyinka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxaa soo foodsaartay Cabsi aad u badan.